Online paikady lalao – malaza indrindra andry. Eto ny fitiavana no afaka hilalao, ankizivavy sy ny ankizilahy, ray aman-dreny dia tsy nisalasala ihany koa ny ady virtoaly Tompon'ny maro, mampiseho ny fahavalo. Ankoatry ny kilasika simulators, vokatra mifototra amin'ny Flash hanana ny sain'ny. Manomboka ny hetsika avy hatrany taorian'ny fanitsiana tsy ampy taona, ary ny zava-nitranga avy hatrany mihamaro foana. Ataovy milina eo amin'ny trano, fanakatonana ny fahavalo ny làlana mankany amin'ny tena zavatra, handringana ny biby goavam-be isan-karazany sy ny vahiny, fa am-pilaminana mamorona safidy ianao, mifehy fitaovana, trano, ny olona – eto, koa, dia mila paikady.
Fandresena ny Mpanjaka Rugni King
Fiadiana mahery vaika
Moyen Âge Defense Z
Fambolena tractor 2018
Mahery fo an'ireny hevi-diso: Warriors de dieux
Taratasy Craft Wars
Mpiaro ny fiarovana ny mpiambina
Fiarovana ny Crusader
Miaro ny Fanjakana
Lalao Strategy lalao tamin'ny Category:
Farany Strategy lalao
Zavamaniry vs Zombies TD
Andilan-tsivalana: Mandeha sambo ary manamboatra
Fotoana korontana amin'ny fiarovana ny fanjakana
Mitambatra hazakazaka amin'ny cyber
Lalao Online Strategy lalao
Online paikady lalao azo maimaim-poana ny rehetra
Koa satria zavatra anankiray, foana ny drafitra, ny fomba hanombohana sy ny zavatra ho avy. Raha tsy izany, tsy misy lalana, satria dia manomboka ny korontana, ka na inona na inona tsy ho afaka. Open paikady lalao ho maimaim-poana, mba hahatonga ny drafitra mazava dingana kokoa, ary ohatra ny lalao ny mianatra mifehy ny toe-javatra, ary mangataka tari-dalana azy manokana.
Manana simulations tsara ny faritra isan-karazany mba cater ny ankizivavy sy ny ankizilahy ny sokajin-taona rehetra. Ary izy ireo no miady an-trano eo amin'ny paikady
Miaramila Theatre mametraka ny tsehatra
Ny ady dia tsy fotsiny shooter sy sarotra rafitra, izay ho tonga mpanamboatra anao. Dia niady ny ady miaramila sy ny tafika ilaina ny mampiofana, hampitaovana, mitafy, fahana sy mitoetra mandritra ny alina. Fa ny vokatra farany, akanjo rovitra, ny fitaovam-piadiana midina. Noho izany dia mila mahazo lalandava ny singa rehetra mba hihazonana ny ady fahaizany ny miaramila. Ny fomba hanaovana izany? Play-tserasera tetika, ary mianatra.
Nifototra ny toby miaramila, manofana miaramila teo amin'ny beachhead, Naladte fitrandrahana, hanokatra ny fanamboarana fitaovam-piadiana, ho namana sy ny mpiara-monina. Fifandraisana sy ny mpiara-monina - dia singa manan-danja ho an'ny fahombiazana. Amin'izy ireo no hivarotra na ny fifanakalozana zavatra, fa ny fanafihana ny fahavalo, dia afaka matoky ny fanampian'ny mpiara. Azonao atao ihany koa ny hafa handray-tanety ny miaramila tao amin'ny tafika, ary raha ny haavon'ny ny toe-karena dia ho ampy mba hahazoana azy liana, dia hanontany anareo.
Tokony foana renivohitra, fa tokony hampitombo ny hanangana ny haavon'ny fiadiana sy manana ny fiantraikany eo amin'ny mpiara-monina - izay manana bebe kokoa ny ara-bola, izay mitondra ny baolina.
Nanomboka avy tsotra sy misy fihetsika, araka ny tokony ho loharanon-karena zarao ianao, dia ho lehibe hanatratrarana vokatra amin'ny ho avy. Ny zava-dehibe indrindra dia ny mieritreritra ny alalan 'ny mihetsika, indrindra fa ny voalohany, satria misy fiantraikany fomba manao zavatra tsara ianao handeha eo. Ho lasa mahery vaika Aria no hahatananareo fahavalo sy mampiditra azy ho any amin'ny taniny indray mba hiasa ny fomba hanamafisana orina ny sisin-tany ary mba ho azo antoka ny fiadanan'ny ny mponina.
Ny paikady miaramila dia mety ho ara-toekarena tsy misy loko. Dia ny anjaranareo dia ny hiaro ny tanàna na rafitra. Tsy maintsy nametraka miaramila eo amin'ny hevitra mandrakariva ny fahavalo lavo eo ambanin'ny Vary raraka avy eo ny afo.
Tsy misy na inona na inona ilaina, afa-tsy ny lojika sy ny raharaham-barotra
Peace-tserasera paikady mikendry ny fanorenana sy ny fampandrosoana ny raharaham-barotra na ny lojika. Mety tafiditra ao anatin'izany:
Ary noho izany dia afaka hipetraka kilalao mandritra ny andro. Ambaratonga tsirairay dia mahatonga ny fananganana na ny fanorenana ny orinasa lafo vidy kokoa. Ao amin'ny toeram-pambolena misy fitaovana ilaina vaovao sy trano tao an-tanànan'i trano kely dia nosoloina zohy fialofan'ny, ary avy eo ny fonenana sy ny lapa. Restaurants Nanomboka ny fanompoana isan-karazany lovia sy ny teknolojia maoderina accelerates. Toeram-pivarotana Lasa manintona kokoa ny mpividy interiors sy ny isan-karazany izy, ary ny trano fandraisam-bahiny Nohatsaraina mponina mahazo asa fanompoana.
Na dia izany aza, mba hividy zavatra fanampiny, dia ilaina ny miasa tsara: vokatra, manompo mpanjifa, mba hanasitrana ny marary. Dia nahazo ny soa tsikelikely, ary iza no mahalala, mety ho tonga ny tompon'ny orinasa ny harato sy ny soa ho tena miavaka. Andramo ny tenanao amin'ny faritra samihafa, satria afaka hiatrika na inona na inona: trondro, mitady volamena, manangona tantely, hameno ny milina mba mahandro burgers, mba hanorina lalana any Roma. Strategy azo ampiasaina amin'ny latabatra lalao, toy ny ranomasina ady, checkers, echec, TIC-tac-rantsan-tongony.